Jiri oge opupu ihe ubi na matraasi iji mee ka azụmahịa gị dịkwuo mma
* Rush ka ịpịgharịa gaa na njedebe iji hụ ihe ahụ maka ire ere. Ihe eji eme aka di nfe na-eme ka odi mfe iburu ihe. Inwe nwata putara iburu otutu umuaka. Ndị nne ọhụrụ ndị kwesịrị ịkpọ ụmụ ha ga-achọpụta na ọ ga-eme njem. Ọ bụghị naanị iburu nwatakịrị ahụ, kamakwa iburu nwa ahụ mkpa ọ nwere ike ịdị mkpa mgbe ị na-apụ;
Na mgbakwunye, ọnwụnwa anụmanụ na-aga n'ihu; (132) Mana ọ ka ga-ahụ ma FDA ga-anabata data sitere na nyocha ndị a. Ihe FDA nwere ike inye bụ ọmụmụ ihe. Maka akụrụ, nke a nwere ike ịpụta iji ụgbọ mmiri na-eme ka ọ bụrụ ihe eji eme ihe na-emegharị, ma jiri ya tụnyere ọgwụgwọ dialysis na ngalaba akwara.
O metụtara nke a: oke osimiri dị elu dochiela 0.0 ijeri mmadụ iri ise. Igwe Ọmụmụ sayensị nke Atlantic WallMal na-ebugharị eriri nke na-ebute eriri site na ebe ị na-efegharị site na ebe dị iche iche na North, okpomoku na-ekpo ọkụ Europe na Eastern North America. Nke a bụ ụkpụrụ na-esighi ike, dabere na ọkwa dị elu;